एनालिटिक्सले कसरी त्यो सबै जानकारी प्राप्त गर्दछ? | Martech Zone
एनालिटिक्सले कसरी त्यो सबै जानकारी प्राप्त गर्दछ?
यो सप्ताहअन्तमा मँ (ट्राइंकि been) गर्दैछु (सामान्य जस्तो)। यदि तपाईं गुगल एनालिटिक्स खोल्न सक्नुहुन्छ र कति व्यक्तिहरू तपाईंको आरएसएस फिड पढ्दैछन् भनेर हेर्न सक्दछौं भने यो उत्तम हुनेछैन र? सबै पछि, यी अझै पनि तपाईंको साइट र तपाईंको सामग्रीको भ्रमणहरू हुन्, होइनन्? समस्या पक्कै पनि यो हो कि RSS फिडले कोड कार्यान्वयन हुन अनुमति दिदैन जब तपाईंको सामग्री खुल्छ (प्रकारको)। तपाईको वेब पृष्ठले गर्छ।
यदि तपाईं वेब एनालिटिक्सको बारेमा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने, म एउटा किताब र एउटा किताब मात्र सिफारिस गर्दछु, अविनाश कौशिकको पुस्तक, वेब एनालिटिक्स एक दिन एक घण्टा। अविनाशले स्पष्ट रूपमा कारण हामी सर्वर साइडबाट सर्नुको कारण वर्णन गर्दछ विश्लेषण ग्राहक-साइड गर्न विश्लेषण साथै सबै संग चुनौतीहरु।
गुगल एनालिटिक्सले काम गर्ने तरीका वास्तवमा एकदम सरल छ। जब तपाईं GA लोड भएको साइट खोल्नुहुन्छ, एक प्यारामिटरको गुच्छा कुकीमा बचत हुन्छ (ब्राउजरको साथ स्थानीय रूपमा डाटा भण्डारण गर्ने माध्यम) र त्यसपछि जाभास्क्रिप्ट डायनामिक रूपमा गुगल एनालिटिक्स वेब सर्भरमा छवि अनुरोधको लामो क्वेरी स्ट्रि gene उत्पन्न गर्दछ। यसमा एक धेरै जानकारीको साथ - जस्तै तपाईको खाता नम्बर, सन्दर्भ साइट, यो खोज परिणाम हो कि होइन, के खोज सर्तहरू प्रयोग गरिन्थ्यो, पृष्ठ शीर्षक, यूआरएल, इत्यादि।
यहाँ छविको अनुरोध को एक नमूना र क्वेस्टस्ट्रिंग चर:
= १२1278573345 & र utmr = - & utmp = / & utmac = UA-XXXXXX-X & utmcc = __ utma% 3D40694462.1906938102414468000.1215439581
डगलस% २2520२०karkr% २2520२० चम्चा% २2520२० कम्पनी% B बी
मैले विभिन्न क्वेरीस्ट्रिंग भ्यारीएबलहरू बिभिन्न समूहको बारेमा अनुसन्धान गरेर जम्मा गर्न खोजेको छु वेबसाइट:
utmac = "खाता नम्बर"
utmcc = "कुकीज"
utmcn = "utm_new_cam अभियान (१)"
utmdt = "पृष्ठ शीर्षक"
utmfl = "फ्ल्यास संस्करण"
utmhn = "अनुरोध होस्टनाम"
utmje = "जाभास्क्रिप्ट सक्षम भयो? (० | १) "
utmjv = "जाभास्क्रिप्ट संस्करण"
utmn = "अनियमित संख्या - प्रत्येक __utm.gif हिटको लागि उत्पन्न गरियो र gif हिटको क्याचिंग रोक्नको लागि प्रयोग गरियो"
utmp = "पृष्ठ - पृष्ठ अनुरोध र क्वेरी प्यारामिटरहरू"
utmr = "सन्दर्भ स्रोत (रेफरल url | - | ०)"
utmsc = "स्क्रीन र ”हरू"
utmsr = "स्क्रीन रिजोलुसन"
utmt = ".gif हिटको प्रकार (ट्रान्स | आईटम | इम्प्रेस | var)"
utmctm = अभियान मोड (० | १)
utmcto = अभियान टाइमआउट
utmctr = खोजी अवधि
utmccn = अभियान नाम
utmcmd = अभियान मध्यम (प्रत्यक्ष), (जैविक), (कुनै पनि होइन)
म यी दुई मध्ये केही बारे निश्चित छैन ... र मलाई थाहा छैन त्यहाँ अधिक छन् कि छैन, तर यी राम्रा उपयोगी छन् यदि तपाईं सँगै तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा थप डाटा दर्ता गर्न आफ्नै छवि अनुरोध सँगै ह्याक गर्न चाहानुहुन्छ भने - उदाहरणका लागि… तपाइँको आरएसएस ग्राहकहरु को लागी!
आज म मेरो सिद्धान्तको परीक्षण गर्दैछु ... मैले छवि अनुरोध विकसित गरेको छु गर्नुपर्छ आरएसएस प्रयोग गुगल एनालिटिक्समा गर्नुहोस्। पाठ्यक्रमको चुनौती भनेको छ किनकि त्यहाँ कुनै कुकी वा विशिष्ट अनुरोध परिचयकर्ता छैन। ग्राहक सकेजति उही फिड खोल्नुहोस् र गुगल एनालाइटिक्समा धेरै हिटहरू दर्ता गर्नुहोस्। यद्यपि म च्याट गर्न जारी राख्नेछु, र हेर्नुहोस् म केहि अधिक मजबूतको साथ आउन सक्दछु।
यहाँ मेरो छवि अनुरोध छ ... म प्रयोग गर्दैछु पोस्टपोस्ट WordPress प्लगइन मैले फिड सामग्री पछि कोड विकास गरे र राखें।
एउटा नोट, यसले हिटहरू नाप्न जाँदैछ, ग्राहकहरू होइन! यदि तपाईं सदस्यहरू नाप्ने प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंको RSS आइकनमा एक अनलक क्लिक घटना सिफारिस गर्दछु। अवश्य पनि, यसले कसैलाई पनि हराउँदछ जुन तपाईंको हेडरमा लिंक जानकारी मार्फत सदस्यता लिन्छ ... त्यसैले म इमान्दारीसाथ पनि प्रयास गर्दिन। यदि मैले के गर्दै छु भने वा के यो कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारे केही विचारहरू पाउनुभयो भने मलाई भन्नुहोस्!
टैग: effलाभ उठाने पिनरेस्टमोबाइल एड-टु-कार्ट दरहरूमुद्रण
मार्क्स 29, 2009 मा 5: 22 PM
तपाईंले feedburner.com मात्र प्रयोग गर्न सक्नुभएन? गुगलले यसलाई किनेको हुनाले तथ्याङ्कहरू गुगल एनालिटिक्ससँग चाँडै नै एकीकृत हुनेछन्... यो वर्ष मलाई आशा छ!
मार्क्स 29, 2009 मा 5: 38 PM
हो, म अहिले फिडबर्नर प्रयोग गर्छु मेरो फिडको पहुँच मापन गर्न। यद्यपि, मलाई फिडबर्नरमा प्रकाशन ढिलाइ मन पर्दैन र यसमा रहेको विश्लेषण र यसले कसरी वृद्धि र उपयोग देखाउँछ भन्ने कुरालाई इमानदारीपूर्वक घृणा गर्छु।
मैले सुनेको थिइन कि उनीहरूले गुगल एनालिटिक्समा फिडबर्नर तथ्याङ्कहरू तान्न खोजिरहेका छन् - तर त्यो राम्रो हुनेछ!
मेरो पोस्ट राख्नुहोस्!
मार्क्स 29, 2009 मा 9: 43 PM
यदि GA ले भविष्यमा यसलाई समावेश गर्छ भने म अचम्म मान्ने छैन ... केवल तार्किक किनभने Google ले Feedburner को स्वामित्व लिन्छ ... र म सकारात्मक छु कि तपाईं यो प्रयास गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्न।
मार्क्स 30, 2009 मा 12: 59 PM
यसले कुनै पनि प्रयोगका सर्तहरू तोड्दैन? मलाई गुगल एनालिटिक्सबाट तिनीहरूको सर्भरहरू गैर-मानक तरिकामा (जस्तै Img अनुरोधहरूबाट) प्रयोग गरेर प्रतिबन्धित गरिएको थियो भनेर पत्ता लगाउन म घृणा गर्छु।
साथै यदि तिनीहरूले आफ्नो API परिवर्तन गरे (जस्तै प्यारामिटरहरूको क्रम, प्यारामिटरहरूको संख्या, इत्यादि, यो दायाँ टुट्नेछ)
एक परीक्षण खाता संग यो गर्न राम्रो!
utmje र utmjv जाभा सक्षम र जाभा संस्करण हुनुपर्छ। जाभास्क्रिप्टको लागि जाँच गर्दा तपाईंलाई एनालिटिक्सको लागि जाभास्क्रिप्ट चाहिन्छ भनेर विचार गर्दा धेरै अनावश्यक हुनेछ (आधिकारिक रूपमा)